Dacwadda Pistorius oo dib u furmeysa - BBC Somali
Dacwadda Pistorius oo dib u furmeysa
Oscar Pistorius, oo ay horay maxkamadi ugu heshay in uu dilay gabadhii ay saaxiibada ahaayeen sanadkii 2013, ayaa maalmaha soo socda waxaa go'aan laga gaarayaa xukunkiisa, iyada oo xaakimka dacwada qaaday uu ka baaraandegayo xukunka ku haboon.
Dalka Koonfur Afrika, dadka lagu helo in ay si ula kac ah dil u geysteen, ayaa lagu xukumaa ugu yaraan 15 sano oo xabsi ah, balse sanadahaasi ayaa la dhimi karaa, waa haddii la keeno cadeymo muujinaya in aanu qofka ka bixi karin.
Ninka dhalay gabadha la dilay, oo lagu magacaabo Barry Steenkamp, ayaa la filayaa in maalmaha soo socda uu maxkamada horteeda ka marqaati furo, waxaana sidoo kale kiiska ka hadli doona dacwad oogayaasha iyo qareennada difaacaya Pistorius.
Mr Steenkamp ayaa xanuunsanaa inta ay socotay dacwadda ku aaddan dilka gabadhiisa, waxaana hadda ka go'an in uu maxkamada ka hor hadlo.
Sidoo kale, Oscar Pistorius, ayaa qudhiisa laga yaabaa in uu xaakimka u sheego in uu yahay nin isbedelay.
Mr Pistorius ayaa muddo xabsiga ku qaatay, ka dib markii horay loogu xukumay in aan si ula kac ahayn u dilay saaxiibtii, xukunkaasi oo markii dambe ay maxkamad burisay, waxaana uu hadda yahay xabsi guri.